गभर्नर खतिवडाको पदबहाली / ‘तरलता समस्या निर्मूल पार्छु’ | मरुभूमीको कोसेली nepalkuwait
गभर्नर खतिवडाको पदबहाली / ‘तरलता समस्या निर्मूल पार्छु’
Posted on मार्च 23, 2010 by nepalkuwait
(काठमाडौं), नवनियुक्त गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ।
गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उहाँलाई गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो। सोमबार एक समारोहका बीच प्रधान न्यायाधीश अनुपराज शर्माले डा. खतिवडालाई शपथग्रहण गराउनुभयो।उहाँको स्वागतमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर खतिवडाले वित्तीय क्षेत्रमा विस्तार भए पनि अझै दुई तिहाइ जनता बैंकिङ सेवाबाट विमुख हुनुपरेको बताउनुभयो। उहाँले वित्तीय पहुँच आममानिसमा पुर्याउनु आफ्नो प्रमुख उद्देश्य रहेको जानकारी दिनुभयो। शहर केन्द्रित वित्तसेवालाई ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो।
आर्थिक वृद्धि न्यून हुनु, मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा रहनु, शोधनान्तर स्थिति २० अर्बले घाटामा हुन अर्थतन्त्रको नकारात्मक पक्ष रहे पनि नेपालसँग करिब ७ महिनालाई धान्न सक्ने वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति रहेकाले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था भने नरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले नेपालीको कुल खर्चयोग्य आम्दानीमा पनि ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको जानकारी दिनुभयो।
राष्ट्र बैंकको दायरालाई फराकिलो पार्दै दायरामा नपरेका वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थालाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउन जरुरी भइसकेको उहाँको टिप्पणी थियो।
यस्तै राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय क्षमतामा अभिवृद्धि गर्दै कर्मचारीको मनोबलमा अभिवृद्धि गनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो। नियमन र सुपरिवेक्षणले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रतिबद्धता भएमा कर्मचारीको मनोबलमा वृद्धि हुने उहाँको भनाइ थियो।
‘मौद्रिक विस्तार ४ प्रतिशतले बढेको छ। तर बैकिङ क्षेत्रमा अझै तरलताको अभाव रहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो- ‘यसबाट बैकिङ क्षेत्रभन्दा बाहिर नगद राख्ने प्रचलन बढेको स्पष्ट हुन्छ।’ उहाँले तरलता समस्यालाई रिपो, रिफाइनान्सिङजस्ता उपकरण प्रयोग गरेर निर्मूल पारिने बताउनुभयो।
उहाँले व्यापारीवर्गलाई मौद्रिक नीति’bout सल्लाह नदिन आग्रह गर्नुभयो। ‘मौद्रिक नीति बनाउन राष्ट्र बैंक आफै सक्षम छ’ -उहाँले भन्नुभयो।
विगतमा वित्तीय सुधार भन्नासाथ नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सुधारलाई मात्र लिने गरेको बताउँदै समग्र वित्तक्षेत्रको सुधारलाई यसमा समेटिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। सीमित व्यक्तिले कुल ऋण प्रवाहको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्राप्त गर्ने गरेको बताउँदै भविष्यमा यस्तो हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि सो अवसरमा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।
कामु गभर्नरको अन्तिम दिन
नयाँ गभर्नर खतिवडा प्रवेश भएकै दिन कामु गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरको भने सोमबार अन्तिम कार्य दिन परेको छ। कामु गभर्नर मानन्धरको पदावधि आउँदो बिहीबार सकिँदै छ। उहाँले आज मंगलबार बिदा लिनुभएको र बुधबार र्सार्वजनिक बिदा रहेका कारण उहाँको कार्य दिन आजै मात्र रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।
नयाँ गभर्नरको आगमनसँगै राष्ट्र बैंकमा एक डेपुटी गभर्नरको पद खाली रहन पुगेको छ। रिक्त डेपुटी गभर्नर नियुक्तिका लागि गभर्नरले बहालवाला कार्यकारी निर्देशकमध्ये दुई कार्यकारी निर्देशकको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ। गभर्नरले सिफारिस गरेकामध्ये एकलाई अर्थमन्त्रीले डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्नुपर्नेछ।
« लियोनेल मेसीको लगातार दोस्रो हृयाटि्रक NRNAको अन्तराष्ट्रिय राष्ट्रिय नेतृत्व पंग्तिमा अधिकांश पुँजीपति बर्गका ब्यक्तिहरुनै देखिएको छ »